သတိရနေတဲ့ ပရိသတ်တွေ အလွမ်းပြေစေဖို့ ပိုင်တံခွန်အတူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ အမှတ်တရ ဗီဒီယိုလေးကို တင်ပေးလာတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် – Shwe Likes
သရုပ်ေ ဆာင်သင်ဇာဝင့်ေ ကျာ်ကတော့ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ် တဲ့အတူအပီပြ င်ဆုံးသ ရုပ်ဆောင် ချက်တွေနဲ့ကျ ရာဇာတ်ေ ကာင်တွေမှာအေ ကာင်းဆုံးသ ရုပ်ဆောင်နိုင်တာေ ကြာင့်ပရိ တ်သတ်တွေရဲ့ အားပေးမှု ကိုအခိုင်အမာရရှိ ထားတဲ့မင်း သမီးချောပဲဖြစ်ပါ တယ်။သင်
ဇာဝင့်ကျော် ကတော့ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေမှာ လဲအနုပညာရှင်ညီ အစ်ကိုမော င်နှမများနဲ့ပူးေ ပါင်းပြီးတ က်တက်ကြွကြွပါ ဝင်ကူညီလှူ ဒါန်းပေးတတ်ပါသေး တယ်၊စိတ် ထားကောင်းတဲ့သင် ဇာဝင့်ကျော်ကအ လှူအတန်းတွေမှာလဲရ က်ရက်ရောေ ရာရှိသူတစ်ေ ယာက်
လဲဖြစ်ပါတ ယ်နော်။သင်ဇာဝင့်ေ ကျာ်ကတော် လှန်ရေးကြီးမှာလြဲ ပည်သူတွေ နဲ့အတူအမှန်တရား ဘက်ကပါဝ င်ခဲ့ပြီးလမ်းထွက် ကာလူထု လှုပ်ရှားမှုေ တွမှာအားတ က်သရောပါဝင် လှုပ်ရှားခဲ့ ပါတယ်၊ သင်ဇာကေ တာ့အနုပညာေ မာင်နှမတွေ နဲ့လည်း အရမ်းကို ရင်းနှီးပြီး
ချစ်ချစ်ခင် ခင်နေတတ်သူ ဖြစ်တာေြ ကာင့် အားလုံးက လည်း ချစ်ခင်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့လေးမှာကတော့ အနုပညာေ မာင်နှမဖြစ်တဲ့ ထောင် ထဲက ပိုင်တံခွန်နဲ့အတူ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဗီဒီယိုေ လးကို တင်လာခဲ့ပြီး ဘယ်တော့များမှ အလုပ်အတူ ပြန်လုပ်ရမလဲဆိုပြီး
ရေးသား လာခဲ့ပါတ ယ်နော်… ပရိသတ်ြ ကီးလည်း သင်ဇာနဲ့ ပိုင်တံခွန် တို့ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ကြည့်ပြီး အမြန်ပြန်လွတ်လာစေဖို့ ဆုတောင်းပေးကြပါအုံးနော်…. Source: Thinzar Wint Kyaw
သ႐ုပ္ေ ဆာင္သင္ဇာဝင့္ေ က်ာ္ကေတာ့ အမိုက္စားခႏၶာကိုယ္ တဲ့အတူအပီၿပ င္ဆုံးသ ႐ုပ္ေဆာင္ ခ်က္ေတြနဲ႔က် ရာဇာတ္ေ ကာင္ေတြမွာေအ ကာင္းဆုံးသ ႐ုပ္ေဆာင္နိုင္တာေ ၾကာင့္ပရိ တ္သတ္ေတြရဲ့ အားေပးမႈ ကိုအခိုင္အမာရရွိ ထားတဲ့မင္း သမီးေခ်ာပဲျဖစ္ပါ တယ္။သင္
ဇာဝင့္ေက်ာ္ ကေတာ့ပရဟိတ လုပ္ငန္းေတြမွာ လဲအႏုပညာရွင္ညီ အစ္ကိုေမာ င္ႏွမမ်ားနဲ႔ပူးေ ပါင္းၿပီးတ က္တက္ႂကြႂကြပါ ဝင္ကူညီလႉ ဒါန္းေပးတတ္ပါေသး တယ္၊စိတ္ ထားေကာင္းတဲ့သင္ ဇာဝင့္ေက်ာ္ကအ လႉအတန္းေတြမွာလဲရ က္ရက္ေရာေ ရာရွိသူတစ္ေ ယာက္
လဲျဖစ္ပါတ ယ္ေနာ္။သင္ဇာဝင့္ေ က်ာ္ကေတာ္ လွန္ေရးႀကီးမွာၾလဲ ပည္သူေတြ နဲ႔အတူအမွန္တရား ဘက္ကပါဝ င္ခဲ့ၿပီးလမ္းထြက္ ကာလူထု လႈပ္ရွားမႈေ တြမွာအားတ က္သေရာပါဝင္ လႈပ္ရွားခဲ့ ပါတယ္၊ သင္ဇာေက တာ့အႏုပညာေ မာင္ႏွမေတြ နဲ႔လည္း အရမ္းကို ရင္းႏွီးၿပီး
ခ်စ္ခ်စ္ခင္ ခင္ေနတတ္သူ ျဖစ္တာေျ ကာင့္ အားလုံးက လည္း ခ်စ္ခင္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ေလးမွာကေတာ့ အႏုပညာေ မာင္ႏွမျဖစ္တဲ့ ေထာင္ ထဲက ပိုင္တံခြန္နဲ႔အတူ ရိုက္ကူးထားတဲ့ ဗီဒီယိုေ လးကို တင္လာခဲ့ၿပီး ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ အလုပ္အတူ ျပန္လုပ္ရမလဲဆိုၿပီး
ေရးသား လာခဲ့ပါတ ယ္ေနာ္… ပရိသတ္ျ ကီးလည္း သင္ဇာနဲ႔ ပိုင္တံခြန္ တို႔ရဲ့ ဗီဒီယိုေလးကို ၾကည့္ၿပီး အျမန္ျပန္လြတ္လာေစဖို႔ ဆုေတာင္းေပးၾကပါအုံးေနာ္…. Source: Thinzar Wint Kyaw
မိခင်မပါတော့ဘဲ ဆုတက်ယူဖို့လေ့ကျင့်နေတဲ့ သားလေး ကိုကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ မီးမီးခဲခင်ပွန်း